Ahoana ny fametrahana codec multimedia | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fametrahana codec multimedia
Misy olana ara-dalàna sy hafa, izay mahatonga ny Canonical hanapa-kevitra ny tsy hametraka ao amin'ny fametrahana default ny Ubuntu, fonosana sasany ary ny sasany amin'ireo fonosana ireo dia mifandray akaiky codecs fa mila mametraka izahay hanatsarana ny fahombiazan'ny Ubuntu.
Ho fepetra voalohany dia hanokatra synaptic izahay, izay azontsika atao amin'ny alàlan'ny fanoratana avy amin'ny console, ireto andalana baiko manaraka ireto:
Aorian'izany, hangataka amintsika ny tenimiafin'ny mpampiasa antsika ny rafitra, aorian'ny hidirantsika azy dia ho synaptika isika.
Amin'ny synaptika dia mankany C isikaonfiguration> Repositories ary eo no hamarininay fa mavitrika ireto manaraka ireto trano fitahirizana:
Universe> Voafetra> Multiverse
Ireo safidy ireo dia ireo izay hita ao anaty fononteny ao amin'ny faran'ny tsipika fanazavana isaky ny boaty fanamarinana, izay azo jerena amin'ity sary manaraka ity.
Raha tsy voamarika toy ny amin'ity sary ity ny boaty, azafady soraty ary ekeo.
Manokatra console izahay izao ary apetaho izao andalana baiko manaraka izao:
sudo aptitude hametraka ubuntu-restrished-extra
Ity tsipika ity dia mamela ny fametrahana ireo fonosana mametra fatratra ny ubuntu anisan'ireny ny codecs hanohanana ny java, mp3, Divx, ary lava sns.
Izao fotsiny ny codecs medibuntu.
Medibuntu dia tahiry ahafahantsika mahita rindranasa sy codecs izay tsy apetrakao ao anaty Karmic.
-Mpiampy ny trano firaketana MEDIBUNTU izahay:
sudo wget http://www.medibuntu.org/source.list.d/karmic.list --output-document = / etc / apt / sumber.list.d / medibuntu.list
-Manafatra ny lakilen'ny GPG izahay:
sudo aptitude update && sudo aptitude mametraka medibuntu-keyring && sudo aptitude fanavaozana
Afaka mametraka fonosana vaovao vitsivitsy isika izao:
Ho an'ny playback DVD dia manatanteraka izahay:
sudo apt-mahazo mametraka libdvdcss2 sudo apt-mahazo mametraka libdvdread4
Avy eo, avy amin'ny console dia manoratra izahay (tsy voatery):
Mametraka codecs Windows, Real Networks, Quick Time, ary ny hafa:
Ao amin'ny Ubuntu 9.10 32 bitay no ampiasainay:
$ sudo apt-mahazo mametraka w32codecs
Ao amin'ny Ubuntu 9.10 64 bitay no ampiasainay:
sudo apt-mahazo mametraka w64codecs
Mametraha codec fanampiny hafa:
sudo aptitude hametraka codecs tsy maimaimpoana
Manomboka izao dia afaka mametraka rindrambaiko manana orinasa hafa toa ny Adobe na Skype avy amin'ny tahiry medibuntu ihany koa isika.
sudo aptitude hametraka skype sudo aptitude hametraka fanafohezana
Manoro hevitra anao aho hitsidika ny pejy MEDIBUNTU hahita torolàlana amin'ny sehatra hafa. Misy ireo izay manome soso-kevitra ny fametrahana flash player, fa ny Karmic koala dia misy gnash napetraka aorinan'ny toerana misy azy ary tsy maintsy lazaiko fa manolo-tena tsara ny mpilalao flash izy io ary loharano malalaka sy misokatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Ahoana ny fametrahana codec multimedia
Fampianarana tena tsara. Mariho fa nanoratra codec ianao tao amin'ny baiko ary tokony handeha codecs izy io, tsy misy accent.
Misaotra betsaka fa nila anao hijery DVD aho!
Valio i alejandro
"Codec" dia manana accent amin'ny teny espaniola. Hoy i Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Codec
Na izany na tsy izany, misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra ary faly be aho nahafantatra fa afaka nanampy anao tamin'ny olanao aho! =)
Ny lalao 12 Open Source tsara indrindra
Ahoana ny fomba hanampiana fampiharana amin'ny Linux